Enwere m ike ịnweta ngwa ngwa Amazon nke na-arụ ọrụ n'ezie?
Nke a bụ ihe ndepụta nke isi ngwaọrụ anọ maka ngwaahịa ngwaahịa Amazon nke na-arụ ọrụ n'ezie. N'okpuru ebe a, m ga - egosi gị AMZ Tracker, Inspector isiokwu, Scope, na Unicorn Smasher. Enwere m ule nke ọ bụla n'ime ha, n'ihi ya, m na-ekwu na ha niile bụ ndị e gosipụtara.
Amz Tracker bụ ngwá ọrụ kachasị mma iji soro ma chọpụta mkpụrụokwu ngwaahịa Microsoft kachasị dị irè. Ngwaọrụ a ga-aba nnọọ uru maka ndị na-ere ahịa ọ bụla, ndị ọkachamara azụmaahịa na-arụ ọrụ n'ebe ahụ ruo afọ ole na ole gara aga. Ọ pụtara na iji AMZ Tracker ị nwere ike ọ bụghị naanị na-agbaso isiokwu ndị kachasị elu-ndị na-azụ ahịa n'ebe ahụ, ma ị nwekwara ike ịhụ ihe kpọmkwem na ihe ọtụtụ gị na ndị asọmpi kacha nso na-ere - online 3d text generator free. Kedu ihe ọzọ - ngwá ọrụ a karịrị ngwaahịa ngwaahịa Amazon, dịka ya na njirimara Inbuilt On-Analyzer ị ga-enwe ohere maka imezi ngwaahịa gị. N'ikpeazụ, a ga-egosipụta ya n'elu ihe ọchụchọ dị mkpa na Amazon.
Onye na-enyocha akwụkwọ abụghị naanị otu ngwá ọrụ iji rụọ ọrụ na ngwaahịa Amazon. N'ezie, ọ bụ ihe zuru ezu nke ihe nchọgharị weebụ dị iche iche, dika Reverse ASIN Keyword Tool (aro isiokwu nke ụfọdụ ASIN na-agbaso maka), Nkọwapụta Ngwaahịa (onye ịzụta isiokwu, ngwaahịa zụrụ azụ na ọchụchọ ọchụchọ metụtara ya), Indexation Tester (ngwa ngwa - Usoro maka gị iji jide n'aka na ngwaahịa gị na-ahụ nke ọma site na ndị ahịa na-ege ntị ahịa), Ngwá Ọrụ Ntuziaka Amazon (chọọ isi okwu ogologo-tail na mkpirisi ọchụchọ na-atụ aro maka gị), na Nchọpụta Ngwaahịa Amazon (iji melite ntanetịime ngwaahịa gị na ntanetị n'ịntanetị).
Igodo bụ ngwaọrụ ọzọ dị mma iji nyere gị aka n'ịchọpụta mkpụrụ okwu sayensị Amazon. N'etiti akụkụ ya kachasị ike, ngwá ọrụ a dị nnọọ mkpa ịchọta mkpụrụ okwu na-eme elu na ndị ahịa gị kachasị mma maka ọkwa. Tụkwasị na nke a, Ọdịdị nwere ike inyere gị aka ịchọta ụfọdụ ederede nkwa na ugbu a na-enweta ewu ewu ma na-atụ aro maka gị. N'ikpeazụ, ngwá ọrụ a dịkwa oke mma ma ọ bụrụ na ị nweta njikarịcha mgbasa ozi PPC, ma chọpụta akụkụ dị oke ọnụ ahịa n'ime nanị mpi egwu. Buru n'uche, na ngwá ọrụ a nwere ike inye aka na-eme ka ọ dịkwuo mfe ma nwee nchedo - yana njikwa atụmatụ ihe ize ndụ, Ọrụ nwere ike igosi gị atụmatụ ego ọ bụla a kwụrụ ụgwọ kwa ọnwa, ọsọ ọsọ ọsọ, na uru efu ka a tụrụ anya ya mgbe FBA (Fulfillment By Amazon ) mmefu.
Unicorn Smasher bụ aha nzuzu maka ngwá ọrụ nsuso iji rụọ ọrụ na ngwaahịa Amazon, kama ọ bụ nke a maara dịka ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị iji malite ịchị ebe ahụ. Emezu n'ozuzu, ngwá ọrụ a niile nwere ike inyere gị aka na nchịkọta data zuru ezu na ọnụahịa, nsụgharị ahịa kacha mma, ọnụahịa ahịa, nyocha ndị ahịa, nchịkwa dị mfe, nakwa dị ka ihe ndekọ ego a na-ahụkarị. Jiri Unicorn Mee ka ọ ghara ichefu ihe ị na-eche na ị manyere ime otu ugboro.